के तपाईको मोबाइल बेला बेला तात्छ ? मोबाइलमा ब्याट्री नटिकेर हैरान हुनुहुन्छ ? ﻿ - RAISUJAN.COM.NP
मोबाईल वर्तमान समयमा हामीलाई नभई नहुने आवश्यकता मध्ये एक भएको छ । यदि हाम्रो मोबाइलमा थोरै पनि समस्या आयो भने हामी एकदमै चिन्तित बन्छौं । जब हामी हाम्रो मोबाइललाई धेरै कार्य एकै साथ गर्दा हाम्रो मोबाइल हिट हुने गर्छ
६. आफनो मोबाईललाई पुन सुरुवात (Restart) गर्दिनुस
मोबाइलमा ब्याट्री नटिकेर हैरान हुनुहुन्छ ?
पछिल्लो समय मोबाईल फोन खाना जस्तै दैनिक उपभोग को साधन भनेको छ। एसले घडि, क्यामरा, रेडियो लगायतका विविन्न काम गर्ने भएको छ । धेरैको दिनभरकिो सहारा बन्दै आएको छ मोबाईल सेट । तर, धेरै जसो स्मार्टफोनको प्रयोगकर्ताहरु ब्याट्री नटिक्ने समस्याले गर्दा हैरानीमा हुन्छन । केहि सामान्य कुरामा ध्यान दिन सकियो भने यो तनावबाट केहि छुटकारा पाउन सकिन्छ ।